के उदयपुरमा प्रस्तावित सगरमाथा विमानस्थल बन्ला त ?
हाेम बस्नेत सोमबार, जेठ १६, २०७९
उदयपुर । उदयपुरमा विमानस्थल बन्ने हल्ला चलेको झण्डै पाँच दशकपछि बजेट भाषणमा समावेश गरिएको छ । गत आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उदयपुरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न र पहुँच विस्तार गर्न डडेलधुरा, बागलुङको बलेवा, दाङको टारी गाउँ, टिकापुर, चौरजहारी लगायतका विमानस्थलको स्तर उन्तती गरिने छ । यसैगरी उदयपुरमा विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रआरम्भ गरिने छ । हवाई पूर्वाधार विकासको लागि रु १२ अर्व २४ करोड निवियोजन गरेको छु ।’
अर्थमन्त्री शर्माले निर्माण कार्य प्रआरम्भ गरिने भनेको विमानस्थाल त्रियुगा नगरपालिका–१ र २ मा प्रस्तावित ‘सगरमाथा आन्तरिक विमानस्थल’ हो । हवाई पूर्वाधारमा रु १२ अर्व २४ करोड बजेट विनियोजन भएपनि प्रस्तावित सगरमाथा विमानस्थलको नाममा बजेट तोकिएको छैन् । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार अब त्यही हवाई पूर्वाधारबाट पुन सगरमाथा विमानस्थलको नाममा बजेट विनियोजन हुने छ ।
उक्त बजेट भाषणपछि उदयपुरमा विमानस्थलको बारेमा दुईप्रकारका तर्क र बिर्तक सुरु भएका छन् । एकथरीले विमानस्थल बनाउने कुरा हल्ला मात्र भएको दाबी गर्न सुरु गरेका छन् । अर्काथरीले पाँच दशकपछि भएपनि बजेटमा समावेश भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । उदयपुरमा विमानस्थल बनाउने चर्चा ४९ वर्ष अघिबाट सुरु भएको थियो । अझै भनौं, ४९ वर्षपछि सरकारले उदयपुरमा विमानस्थल बनाउने औपचारिक घोषणा बजेट भाषणामार्फत गरेको छ । ठोस निर्णयसहित बजेट भाषणमा नसमेटिएकाले बन्छ ? वा बन्दैन भन्ने वहस सुरु हुनु पनि स्वभाविक नै हो ।
केही समय अघि विमानस्थलको काम अघि बढाउने भन्दै वन क्षेत्रमा रुख कटानको लागि छपानसमेत भएको थियो । रकम नभएकाले कटान हुने काम रोकिएको थियो । सम्भवनः अब हवाई पूर्वाधार शीर्षकबाट विनियोजना हुने बजेटले रुख कटान हुनेछ । रुख कटान भएपनि पुनः फेरि रोकिने प्रष्ट छ । किनकी प्रयाप्त बजेट किटान गरिएको छैन् । अर्काे आर्थिक वर्षको बजेटमा सगरमाथा विमानस्थलको नाममा बजेट किटान हुनेछ । आशा गरौँ । भर नपरौँ ।
वेला÷वेलामा चुनावी नाराको रुपमा चर्चा हुने विमानस्थाल यसपटक बजेट भाषणले पुनः चर्चामा आएको छ । रुख कटानको लागि छपान सुरु हुँदा, गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै थियो । चुनावी नाराको रुपमा विमानस्थल निर्णमा क्षेत्रको रुख कटान गर्न छपान सुरु गरेको भन्ने चर्चा चलेको थियो ।
अहिले बजेट भाषणमा समावेश भएको छ । यता प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि आउँदै छ । कतै त्यही निर्वाचनको लागि अर्मुत रुपमा विमानस्थलको नारा बजेट मार्फत लगाइएको होइन ? उदयपुरवासीको मनमा प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रस्तावित विमानस्थलको १५६.११ हेक्टरमध्ये विमानस्थल निर्माण हुने १०५.१ हेक्टरभित्र पर्ने क्षेत्रको रुख कटान हुने भएको छ । त्यसमा झण्डै १३ हजार साल जातका लगायतका रुख छन् । उक्त क्षेत्र नागरिक उड्यन प्राधिकरणले भोगाधिकार क्षेत्र भएको बताइएको छ ।
प्रआरम्भिक प्राविधिक सर्वे र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन पनि भइसकेको छ । प्राविधिक सर्वे र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन हुनुभन्दा अगाडी तीन ठाउँमा तीन पटक सारेर शिलन्यास गर्दै तेस्रो पटक हालको त्रियुगा नगरपालिका–१ र २ जोगिदहमा पु¥याइएको थियो ।
त्यसपछि त्यहाँबाट सरेको छैन् । जोगिदहमा वर्खाको समयमा कुहिरो नलाग्ने तथा हिउँदको समयमा हुस्सु पनि नलाग्ने भएको भन्दै शिलन्यास गरिएको थियो । प्रस्तावित डिजाईनमा एकहजार ७५० मिटर लम्बाइ, ३० मिटर चौडाई रहेको धावनमार्ग, ७२ मिटर लम्बाई १८ मिटर चौडाई रहेको ट्याक्सी वे ४४३ मिटर लम्बाई र १८ मिटर चौडाई रहेको टयक्सी वे.रहने गरी डिजाईनको प्रस्ताव गरिएको थियो । विमानस्थल निर्माणको लागि गरिएको वातावरण प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन (इआईए) का अनुसार एकसय ५६ दशमलव ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुरै जंगल भित्र पर्दछ ।
सोही विमानस्थल कहिले बन्छ ? कुन पुस्ताको पालामा बन्छ ? कुनै सरकारी ग्यारेन्टीचाँही अहिले पनि छैन् ? अब यसको ग्यारेन्टी उदयपुरबाट चुनाव जितेर मन्त्री, सांसद भएका नेताहरुले गर्नुपर्छ । यदी गर्न सकेनन् भने, भन्नुपर्छ, चुनावी नारा मात्र बनाउने नेतालाई जनताले चिन्नु पर्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १६, २०७९, ११:४१:००